Rag argagixiso lagu eedeeyay oo xabsiga laga siidaayay | Somaliska
Labo wiil oo Soomaaliyeed oo hore loogu xukumay min 4 sano oo xarig ah ka dib markii lagu eedeeyay in ay qorsheynayeen weeraro argagixiso oo ay ka geystaan Soomaaliya ayaa xabsiga laga siidaayay ka dib racfaan. Maxkamada Racfaanka Göteborg ayaa wiilashaan xabsiga ka siidaysay inta kiiskooda dib loo eegayo. Wiilasha lagu kala magacaabo Maxamud Jamac iyo Bile Ilyas Maxamed ayaa horey loo xukamay ayagoo lagu eedeeyay in ay ka tirsanaayeen Xarakada Al-shabab. Siideyntooda ayaan ahayn in dhamaan dambigii laga qaaday balse waa inta kiiskooda dib loo eegayo. Qareenka wiilasha ayaa soo dhaweeyay arintaas asagoo sheegay in ay macnaheeda tahay in laga yaabo in guud ahaan la siidaayo ama waqtiga xabsiga laga shareeyo. Ka dib markii la aqriyay siideynta wiilasha ayaa waalidiintooda oo maxkamada ku sugnaa farxad la boodeeen ayadoo mid ka mid ah waalidkaas ay warbaahinta ku turi "Ilaah baa mahad leh, Maalinkasta maxkamada ayaan imaanayay, aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay go'aanka, waana hubay in uusan dambiile ahayn" Dhalinyarada xabsiga laga daayay ayaa markii ay tageen xaafadooda ayaa aad waxaa u soo dhaweeyay asxaabtooda iyo qaraabada. Go'aanka ugu dambeeya ee laga gaarayo arinta wiilashaan ayaa la filayaa isbuucyada soo socda balse hada waa xor.
Rag argagixiso lagu eedeeyay oo xabsiga laga siidaayay
Labo wiil oo Soomaaliyeed oo hore loogu xukumay min 4 sano oo xarig ah ka dib markii lagu eedeeyay in ay qorsheynayeen weeraro argagixiso oo ay ka geystaan Soomaaliya ayaa xabsiga laga siidaayay ka dib racfaan. Maxkamada Racfaanka Göteborg ayaa wiilashaan xabsiga ka siidaysay inta kiiskooda dib loo eegayo.
Wiilasha lagu kala magacaabo Maxamud Jamac iyo Bile Ilyas Maxamed ayaa horey loo xukamay ayagoo lagu eedeeyay in ay ka tirsanaayeen Xarakada Al-shabab. Siideyntooda ayaan ahayn in dhamaan dambigii laga qaaday balse waa inta kiiskooda dib loo eegayo.
Qareenka wiilasha ayaa soo dhaweeyay arintaas asagoo sheegay in ay macnaheeda tahay in laga yaabo in guud ahaan la siidaayo ama waqtiga xabsiga laga shareeyo.
Ka dib markii la aqriyay siideynta wiilasha ayaa waalidiintooda oo maxkamada ku sugnaa farxad la boodeeen ayadoo mid ka mid ah waalidkaas ay warbaahinta ku turi “Ilaah baa mahad leh, Maalinkasta maxkamada ayaan imaanayay, aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay go’aanka, waana hubay in uusan dambiile ahayn”
Dhalinyarada xabsiga laga daayay ayaa markii ay tageen xaafadooda ayaa aad waxaa u soo dhaweeyay asxaabtooda iyo qaraabada. Go’aanka ugu dambeeya ee laga gaarayo arinta wiilashaan ayaa la filayaa isbuucyada soo socda balse hada waa xor.
Nin saaxiibtiis dilay ka dibna hilibkeeda cunay
Laanta Socdaalka oo diidmo ka saftay Soomaalida dacwada xareysatay
Xijaabka iyo Shaqada
February 10, 2011 at 18:18
Kii Sunada Nabigaba Ooga waa Argagaxiso dhaha , !!
Wallee Argagaxiso la isku baran dadka moogaase dagan !! Lax dhukan abaar moog !!